टप फोरबीच रमाइला कुराकानी
अन्तर्राष्ट्रिय फ्रेन्चाइज गायन रियालिटी सो ‘नेपाल आइडल’ गत वर्ष नेपालमा पहिलो पटक भित्रियो। पोखराका बुद्ध लामा पहिलो आइडल विजेता बने। मोरङका निशान भट्टराई र ललितपुरका प्रताप दास क्रमशः फस्ट र सेकेन्ड रनरअप बन्न सफल भए।
एपीवान टेलिभिजनबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल आइडलको दोस्रो संस्करण यति बेला अन्तिम चरणमा पुगेको छ। दर्शकसँगै प्रतिस्पर्धी र निर्णायक सबैको मनमा एउटै जिज्ञासा छ– ‘को बन्ला नेपाल आइडल सिजन–२ ?’ अब आउने शुक्रबार ललितपुरको पुल्चोक इन्जिजियरिङ क्याम्पसमा त्यो कौतूहल मेटिँदै छ। नेपाल आइडलका चार प्रतिस्पर्धी अस्मिता अधिकारी, विक्रम बराल, रवि ओड र सुमित पाठकमध्ये एक जना विजेता घोषित हुँदै छन्। तर, अहिले नै यी चार प्रतिस्पर्धी देशको दिल विजेता भने भइसकेका छन्।
‘मन जित्छ उसले, सुमधर गाउँछ जसले’ भन्ने ट्यागलाइनका साथ सुरु भएको नेपाल आइडलको दोस्रो संस्करण विजेताले २० लाख रुपैयाँ, एउटा होन्डा डब्लूआर–भी कार, एउटा एल्बमको सम्झौता र विश्वभ्रमण अथवा ५० लाख रुपैयाँ नगद, एउटा एल्बमको सम्झौता र विश्व भ्रमणमध्ये एक छनोट गर्न पाउनेछन्।
साउन २४ गतेबाट सुरु भएको नेपाल आइडलको दोस्रो संस्करणका प्रोजेक्ट हेड सुरेश पौडेल तथा निर्देशक एलिन श्रेष्ठ र लोकेश वज्राचार्य हुन्। निर्णायकका रूपमा न्ह्यू वज्राचार्य, इन्दिरा जोशी र कालीप्रसाद बाँस्कोटा छन्। सोलाई रीमा विश्वकर्मा र आसिफ शाहले होस्ट गर्दै आएका छन्।
शनिवार एपिवन टेलिभिजनको कार्यालयमा नेपाल आइडलका चारै जना प्रतिस्पर्धी भेटिए। उनीहरूका हाउभाउ र क्रियाकलाप हेर्दा, लाग्दैनथ्यो– उनीहरू प्रतिस्पर्धी हुन्। एउटै टेबलमा हाँस्दै, जिस्किँदै खाना खाइरहेका उनीहरू एकअर्कालाई प्रतिस्पर्धीभन्दा पनि असल साथी भन्न रुचाउँछन्। ‘भोलिका दिनमा हामी जहाँ पुगे पनि हाम्रो फ्रेन्डसिप सधैँ यस्तै हुनुपर्छ है, साथी हो !’ रवि भन्दै थिए। रविको कुरामा सही थाप्दै अस्मिता भन्दै थिइन्, ‘हामी सबै नेपाल आइडल भइसक्याैँ...।’
उनको कुरा नटुंगिँदै विक्रमले भने, ‘मैले म्युजिकल पब खोलेँ भने तिमीहरू गीत गाउन आउनुपर्छ, है ?’ उनीसँग सहमति जनाउँदै सुमित ठट्टा गर्दै थिए, ‘गीत गाएको फी चाहिँ कति दिनुहुन्छ नि, विक्रम दाइ ?’
आइडलको फाइनल नजिकिँदै गर्दा प्रतिस्पर्धीको अवस्था के छ ? उनीहरूको मनमा के–कस्ता तरंग उठिरहेका होलान् ? उनीहरू आपसमा के कुरा गर्छन् ? यति बेला उनीहरूको मनोदशा के छ ? यो अहिले सिंगो देशको अभिरुचि र चासोको विषय बनेको छ। यही विषय र परिवेशलाई समेटेर उनीहरूको प्रत्यक्ष कुराकानी यस अंकको ‘सम्पूर्ण’ मा प्रस्तुत गरिएको छ।
मितिः २०७५, मंसिर २९ गते, शनिबार
स्थानः एपीवान टेलिभिजनको कार्यालय, थापाथली, काठमाडौँ
समयः बिहान १० बजे
सुमितः अस्मिता हेर्दाहेर्दै फाइनल पनि आयो, है ? कस्तो लागिरा’छ तिमीलाई ?
अस्मिताः मलाई त एकदमै खुशी लाग्या’ छ। हामी टप फोरसम्म आइएला जस्तो लाग्थ्यो त तिमीलाई ?
सुमितः कहाँबाट लाग्नु ? म त पहिला निशान र प्रताप दाइहरूलाई टीभीमा हेर्दै घुटुघुटु थुक निलेर बस्थेँ। म पनि त्यो ठाँउमा कहिले पुग्नुजस्तो हुन्थ्यो।
अस्मिताः मलाई पनि पहिलाको सिजन हेर्दा ठ्याक्कै त्यस्तै हुन्थ्यो।
विक्रमः आफू त पहिलो सिजनमा राम्रो गर्न सकिएन। अहिले फाइनलसम्म आइपुग्दा त लास्टै दंग छु। अब त ज्यान जाला म्युजिक छाड्दिनँ।
रविः म त यार, बेलाबेला सपना हो कि विपना भनेर झस्किरहन्छु।
सुमितः मलाई पनि सपना हो कि बिपना ? पत्याउनै गाह्रो भा’छ भन्या।
विक्रमः हामी साह्रै लक्की है ?
अस्मिताः कसरी नि ?
विक्रमः पहिलो सिजनमा तीन जना मात्रै फाइनलमा पुग्नुभयो। हामी त चारै जना फाइनलमा पुग्ने मौका पायौँ।
रविः हो त नि।
सुमितः विक्रम दाइ, आइडल बनियो भने जितेको पैसाले के गर्नुहुन्छ ?
विक्रमः रेन्टको लाइफलाई ‘गुडबाई’ गर्छु। त्यो पैसामा थपथाप गरेर एउटा घर बनाउँछु।
अस्मिताः तिमी नि रवि ?
रविः मेरो पनि सोच त घरकै छ।
सुमितः म त एउटा चिटिक्क परेको म्युजिक स्टुडियो खोल्छु।
विक्रमः ओहो, साह्रै खत्रा कुरा पो ग¥यो त केटाले। म पनि एउटा म्युजिकल पब पो खोल्नुपर्ला कि क्या हो। तिमीहरूलाई अहिलेदेखि नै निम्तो छ है। मैले पब खोलेँ भने तिमीहरू सबै जना गीत गाउन आउनुपर्छ नि।
सुमितः गीत गा’को फी चाहिँ कति दिने नि, विक्रम दाइ ?
रविः विक्रमसँग केको पैसा ? हैन त अस्मिता ?
सुमितः दिस इज जस्ट अ पार्ट अफ जोक।
अस्मिताः पैसा दिनुपर्छ भनेर विक्रम दाइ अहिलेदेखि नै सिरियस हुन थाल्नुभयो कि क्या हो ?
विक्रमः उडाओ, उडाओ, सबै जना मिलेर मलाई उडाओ।
रविः अब कति नै दिन बाँकी छ र उडाउन ? तर, जसले जिते पनि, पछि जो जहाँ भए पनि, हाम्रो फ्रेन्डसिप जस्ताको तस्तै हुनुपर्छ है, साथी हो !
अस्मिताः जीत–हारको त कुरै भएन नि। यहाँसम्म आइपुग्नु नै हाम्रो लागि ठूलो कुरा हो। हामी सबै जना नेपाल आइडल भइसक्यौँ।
सुमितः यहाँसम्म आइपुग्दा धेरै कुरा सिक्न पाइयो।
रविः जहाँसम्म पुगिन्छ, सबै जना सँगसँगै जाऔँ। अहिले जसरी एकअर्कासँग आइडिया सेयर गर्दे अगाडि बढिरहेका छौँ, आगामी दिनमा पनि त्यस्तै होस्।
विक्रमः साँच्चै, रविलाई त नाच्न पनि आउँछ क्यारे हैन ?
सुमितः हो नि।
अस्मिताः हामीले एल्बम निकाल्यौँ भने रविलाई मोडल बनाउनुपर्छ।
रविः मोडल सोडलको कुरा छोड। मेरो दिमागमा अस्तिदेखि एउटा कुरा आइरहेको छ।
विक्रमः के कुरा ?
रविः गाडी जसले जिते पनि एक–एक वटा पांग्रा भागमा आउने रहेछ।
अस्मिताः सबै जना एउटा–एउटा पांग्रा बोकेर मनाङ–मुस्ताङ घुम्न जानुपर्छ, है ?
विक्रमः अरू कुरा थाहा छैन जसले जिते पनि गाडीको म्युुजिक सिस्टम चाहिँ मेरो।
रविः स्पिकर चाहिँ म लिएर जान्छु।
अस्मिताः तिमीहरू बाँडफाँड गरेर बस। सुमित र म चाहिँ गाडी लिएर घुम्न जान्छाैँ।
सुमितः जसले जिते पनि कुदाउन चाहिँ मै कुदाउँछु है ?
रविः सुमित, हामीलाई पनि ड्राइभिङ सिकाउनुपर्छ तिमीले।
सुमितः भइहाल्छ नि।
अस्मिताः नेपाल आइडल जितिनँ भने पनि एउटा कार त म जसरी भए पनि किन्छु। आफैँले पैसा कमाएर कार किन्ने ठूलो धोको छ।
विक्रमः तिमीलाई अहिलेदेखि नै बेस्ट अफ लक !
रविः अस्मिताले बोलेपछि गरेरै देखाउँछे।
विक्रमः तिमीहरूलाई रिजल्ट के होला भनेर डर लाग्या छैन भन्या ?
अस्मिताः मलाई त छैन।
सुमितः मेरो पनि डर–सर सब भागिसक्यो। मेरो त सपना पूरा भइसक्यो। जीवनभरिलाई पुग्ने कुरा सिकिहालियो। योभन्दा बढी के चाहियो।
रविः अस्मिताको होम भिजिटको भिडियो मलाई साह्रै राम्रो लाग्यो। निकै रमाइलो ठाउँ रहेछ तिम्रो।
सुमितः हाम्रो ठाउँ मात्रै होइन, नेपालै राम्रो छ। झन् तिम्रो होम भिजिटको भिडियो हेर्दा मेरो त आँखामा आँशु नै आयो।
अस्मिताः म पनि निकैै भावुक भएँ।
सुमितः अस्मिता दिदी, हाम्रो त कस्तो नचाहिने समाचार आएछ है ?
अस्मिताः त्यही त भन्या। म त छक्क परेँ।
विक्रमः अँ, मैले पनि तिमीहरूको झगडा परेको रे भनेर अनलाइनहरूबाट थाहा पाएको थिएँ।
रविः यस्तो कुरालाई वास्ता गर्नुहुँदैन, क्या। तिमीहरूबारे एउटा ट्रोल देखेको थिएँ मैले। अस्मिता र सुुमितको फोटो थियो। त्यसमा ‘जो अति लोकप्रिय बन्छ, अक्सर त्यसैको खुट्टा तानिन्छ’ भनेर लेखिएको थियो। त्यो झगडा होइन, तिमीहरूको प्रगति हो।
विक्रमः म त यहाँबाट निस्किसकेपछि सबैभन्दा धेरै इन्द्र गुरुलाई मिस गर्छु, यार।
अस्मिताः हो नि। उहाँले हाम्रा लागि धेरै गर्नुभएको छ।
विक्रमः इन्द्र सर साह्रै चिल्ड, रिल्याक्स्ड र कुुल हुनुहुन्छ, है ?
रविः मलाई त उहाँ एकदमै फ्रेन्ड्ली पनि लाग्छ।
सुमितः उहाँलाई त उठेरै स्यालुट गर्नुपर्छ। गुरुहरूले आफूसँग भएको सबै कुरा चेलालाई कहाँ बाँड्छन् र ? तर, उहाँले हामीलाई आफूसँग भएका सबै कुरा दिनुभएको छ।
रविः उहाँमा म गुरु हो भन्ने दम्भ छैन।
विक्रमः म त कहिलेकाहीँ उहाँले बोल्ने शब्द सुनेर मुर्छा पर्छु भन्या।
अस्मिताः कस्तो शब्द ?
विक्रमः हामी होटलबाट कतै निस्किनुपर्यो भने ‘लौ अब होटलबाट मुन्टिम’ भन्नुहुन्छ। ‘तिमीले यो गीत बिगार्यौ’ भन्नुपर्यो भने ‘तिमी गुडनाइट’ भन्नुहुन्छ।
सुमितः उखान–टुक्कामा त झन् उहाँलाई कसैले भ्याउँदैन।
अस्मिताः ‘तिमी यो गीत गाएर मात्र हेर, मान्छेहरू फ्याट्टै ढल्छन्’ भन्दा मलाई झन् कति हाँस उठेको !
सुमितः हाम्रो डीआई सर पनि मज्जाकै लाग्छ मलाई।
विक्रमः यहाँ हाम्रो बुबाआमा भनेकै हाम्रो डीआई सर त हो।
अस्मिताः डीआई सरसँग गीतसम्बन्धी नलेज पनि छ नि, थाहा छ तिमीहरूलाई ?
सुमितः हो नि। ७५ प्रतिशत डिसिप्लिन इन्चार्ज भए पनि २५ प्रतिशत चाहिँ उहाँ म्युजिकल इन्चार्ज पनि हो।
सुुमितः जति बेला पनि हेडफोन लगाएर हिँड्दा कान दुख्दैन भन्या रवि तिम्रो।
रविः बानी परिसक्यो।
विक्रमः ह्यान्डसम बन्न झुन्ड्याएको हो कि गीत सुन्न ?
रविः मिलाएर बुझ न।
विक्रमः म त जति पटक आफूलाई टिभीमा देख्छु, त्यति पटक ह्यान्डसम–ह्यान्डसम हुँदै गएको देख्छु भन्या।
रविः त्यो त सब मेकअपको कमाल हो, केटा !
सुमितः म त आफूलाई ऐनामा हेर्दै, टीभीमा हेर्दै गर्छु। ऐनामा आफ्नो अनुहारै कस्तो–कस्तो लाग्छ। टीभीमा त कस्तो राम्रो देखिने है ? आफू नै होइन जस्तो !
अस्मिताः तिमीहरूलाई कस्तो हुन्छ, कुन्नि ? आफूलाई त दिनको तीनचार चोटि आफ्नो पर्फर्मेन्स युट्युबमा नहेरी निन्द्रै लाग्दैन।
सुुमितः म चाहिँ धेरै प्रोमो हेरेर बस्छु।
विक्रमः मलाई त हरेक पटक आफूले दिएको पर्फर्मेन्स युट्युबमा हेरिसकेपछि यो भन्दा अझै बेटर गर्न सक्थेँ जस्तो लाग्छ।
रविः मलाई पनि।
सुमितः त्यस्तो हुनु राम्रो हो नि। नत्र प्रगति नै हुँदैन । अब त ‘हे प्रभु, रक्षा गर’ भन्ने एलिमिनेसनको दिन पनि गए है। फ्राइडे त मलाई कहिल्यै नआओस् जस्तो लाग्थ्यो।
रविः ब्ल्याक फ्राइडे हो त्यो।
अस्मिताः सबैसँग घुलमिल भइसकेपछि छुट्दा साह्रै नरमाइलो लाग्छ नि।
रविः आफू सुरक्षित पनि हुन मन लाग्ने, साथीहरू पनि कोही आउट नभइदिऊन् जस्तो लाग्ने, है ?
सुमितः फ्राइडे भन्दा डरलाग्दो त न्ह्यू सरको एक्सप्रेसन पो हुन्थ्यो त। उहाँ ढुस्स परेर बस्नुभयो भने ‘केटा तैँले आज राम्रो गाइनस्’ भनेर बुझे भयो।
विक्रमः पहिलो सिजनको अडिसनमा मैले रक गीत गाएको थिएँ। डरले ध्वस्तै गाएछुु। काली सरले ‘नो’ भनिसक्नुभएको थियो। न्ह्यू सरले त ‘विक्रम तिमीले मलाई यो गीतबाट थर्काएको हो’ रे क्या ? मलाई त के भन्नु के भन्नु भयो। एक छिनपछि फेरि ‘तर, मलाई तिम्रो गाली मन प¥यो’ रे।
अस्मिताः हो नि, उहाँ एकदमै झुक्याएर कमेन्ट गर्नुहुन्छ।
सुमितः मलाई पनि अडिसनमा त्यस्तै फसाद परेको थियो। इन्दिरा म्यामले गोल्डेन कार्ड दिनुभयो। न्ह्यू सरले त रिसाएर ‘यो तिमीले कसलाई सोधेर दिएको’ भन्नुभयो। लौ खत्तमै गाएछु, कि क्या हो जस्तो लाग्यो। पछि गोल्डेन माइक पाएपछि कम्ता खुशी लागेको हैन।
विक्रमः आइडलपछि तिमीहरू सबैको सोच के छ नि ?
रविः अब पनि म्युजिकबाहेक दोस्रो सोच होला र ?
सुमितः त्यही त।
अस्मिताः म त नर्सिङ र सिंगिङ दुवैलाई लिएर अगाडि बढ्छु।